माझी बस्ती निर्माणबाट श्वेता खड्काले हात झिकिन्, मेयर भन्छन्– ऋणमा डुबेको छैन माझी बस्ती निर्माणबाट श्वेता खड्काले हात झिकिन्, मेयर भन्छन्– ऋणमा डुबेको छैन Canada Nepal
काठमाडौं । नायिका श्वेता खड्काले सिन्धुपाल्चोकको चौतारा साँगाचोकगढी १४ मा निर्माणाधीन माझी बस्तीबाट हात झिकेकी छन् । श्वेताश्री फाउण्डेसनको अगुवाइमा नायिका श्वेताले ५३ घर माझीका लागि एकीकृत बस्ती बनाउने घोषणा गरेर २०७४ जेठ १५ बाट निर्माण सुरु गरेकी थिइन् । तर, हालसम्म सो बस्ती निर्माण सम्पन्न भइसकेको छैन ।
सोही समयमा बस्ती निर्माणमा जुटेका कलाकार तथा समाजसेवी सीताराम कट्टेल धुर्मुस र कुञ्जना घिमिरे सुन्तलीले चारवटा एकीकृत बस्ती निर्माण सम्पन्न गरेर समुदायलाई हस्तान्तरणपछि चितवनमा गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला निर्माणमा जुटेका छन् । तर, नायिका श्वेताले थालेको माझी बस्ती निर्माण सम्पन्न भएको छैन । जसको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ ।
बस्ती निर्माण सम्पन्न गर्न नसकेकी उनले करोडौँ खर्चेर विवाह र पार्टी गरेको तथा एक क्लवमा भएको झगडामा उनको उपस्थिति रहेको समाचार सार्वजनिक भएपछि उनलाई झनै आलोचित बनाएको छ ।
त्यसमाथि धुर्मुस सुन्तलीको अभियानसँग आफूलाई दाँजेर माझी बस्ती निर्माणका लागि सहयोग आह्वान गरेपछि उनको अभियानबारे सबैको चासो र जिज्ञासा बढ्यो । तर, उनले सहयोग मागिरहँदा सो बस्ती निर्माणबाट उनले हात झिकिसकेको खुलेको छ ।
तर, उनी सो बस्ती निर्माण अभियानबाट बाहिरिसकेकी चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिकाका मेयर अमान सिं तामाङले क्यानडानेपाललाई जानकारी दिए । श्वेताले माझी बस्ती निर्माणबाट हात झिकिसकेकी छन्’, उनले भने, तर माझी बस्ती निर्माण भने उनको भिजनमा बनेको हो ।’
श्वेताश्री फाउन्डेशनले माझी बस्ती निर्माणबाट हात झिकेसँगै पुनर्निर्माण प्राधिकरणले सो बस्ती बनाउन थालेको उनले जानकारी दिए ।
नायिका श्वेताले माझी बस्ती ऋणमा डुबेको भन्दै सार्वजनिक रुपमा सहयोगको अपील गरेकी थिइन् । तर, सो बस्ती ऋणमा नडुबेको चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिकाका मेयर अमान सिं तामाङले जानकारी दिए ।
माझी बस्ती ऋणमा डुबेको भन्दै नायिका श्वेताले सहयोगको अपील गरेकी छन्, कति ऋण लागेको छ ? भन्ने क्यानडानेपालको जिज्ञासामा मेयर तामाङले भने, ‘माझी बस्ती ऋणमा डुबेको भन्ने मलाई लाग्दैन ।’ किन ? पुनः क्यानडानेपालले जिज्ञासा राख्यो । ‘माझी बस्तीका लागि सरकारकाले दिएको प्रत्येक घरका लागि तीन लाख, स्थानीय निकाय, जिल्लास्तरलगायतबाट आर्थिक सहयोग भएको छ’, मेयर तामाङले जवाफ दिए ।
श्वेताश्री फाउन्डेसनले माझी बस्तीबाट हात झिकेको मेयर तामाङले बताए पनि यसबारे श्वेता खड्काको कुनै धारणा सार्वजनिक भएको छैन । श्वेताश्री फाउन्डेसनले बस्ती निर्माणबाट हात झिकेको भन्ने विषयमा थप बुझ्न गरेको श्वेतासँग सम्पर्क गर्ने प्रयास असफल भयो । उनले बोक्दै आएको दुईवटा मोबाइल नम्बरमा फोन गर्दा सम्पर्क हुन सकेन । यसर्थ सो माझी बस्ती निर्माणबाट श्वेताश्रीले हात झिकेको भन्ने स्थानीय तहले दिएको जानकारीलाई श्वेता खड्काबाट भने थप पुष्टि गर्ने प्रयास सफल हुन सकेन ।
माघ २६, २०७७ सोमवार १७:०५:५८ बजे : प्रकाशित
# अमान सिं तामाङ